समाजको घि’नलाग्दो पाटोः पैसा कमाउनकै लागि आमाकै मिलेमतोमा अ’बोध शिशुलाई सडकमा छाडियो – Sandesh Munch
समाजको घि’नलाग्दो पाटोः पैसा कमाउनकै लागि आमाकै मिलेमतोमा अ’बोध शिशुलाई सडकमा छाडियो
August 4, 2020 124
काठमाडौं । जब मानिस पैसाको लोभमा फ’स्छ तब उसले सारा मूल्य र बन्धनलाई तोड्छ भन्ने हालैको एक घटनाले फेरि पुष्टि गरेको छ । नौं/नौं महिना कोखमा राखेर जन्म दिने आमाले नै आफ्नी शिशुलाई झा’डीमा लगेर फा’ल्छिन् भन्ने त अझ कल्पना बाहिरको विषय । तर यही साउन १२ गते एउटी निर्दयी आमाले पैसा कमाउने लो’भमा त्यसै गरेको तथ्य खुलेको छ ।
घटना यही साउन १२ गते सोमबारको दिनको हो । काठमाडौंको कपनमा कागजको कार्टुनमा शिशु फा’लिएको समाचारले सनसनी बनेर फैलि’यो । कपन चौरमा फा’लिएकी शिशुलाई सोही क्षेत्रमा रहेको केयर बालगृहकी संस्थापक पुष्पा अधिकारीले पालन पोषण को जिम्मा लिएपछि उनलाई सहयोग गर्न देश विदेशका मनकारी मनहरु तँछाड मँछाड गरेर ओइरिए ।
ब्यक्तिगत र सामाजिक संस्थाहरु बाट उनलार्य आर्थिक सहयोगको ओइरो नै लाग्यो । तर यसभित्रको कहानी अलग्गै रहेको तथ्य विस्तारै खुल्न थालेको छ । शिशु बैदेशिक रोजगारी बाट हालै सरकारको उद्धार उडान मार्फत् स्वदेश फर्केकी कुनै महिलाले जन्माएको खुलेको छ । यद्यपि काठमाडौंकै कुनै संस्थामा बसेकी ति महिलाको परिचय अहिलेसम्म गोप्य राखिएको छ ।
परिवारलाई खवर नगरी काठमाडौंमै कुनै संस्थामा आश्रय लिई बसेकै समयमा शिशु जन्मेपछी सहयोगी मार्फत् उनको केयर बालगृहका संस्थापकसँग भेट हुन्छ ।र उनैको मिलमतोमा साउन १२ गते नाटक मञ्चन गरी ति शिशुलाई का’र्टुनमा राखेको खु’लासा भएको छ । घ’टना उजागर भएलगत्तै केयर बालगृहका संस्थापक पुष्पा अधिकारी, ती शिशुकी आमा र सहयोगीलाई प्रहरीेले नि’यन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थालेको छ ।
यसबारेको सूचना लिन हाम्रो टोली पुग्दा घ’टनाबारे अनुसन्धान गरि रहेको बौद्ध प्रहरीका डीएसपी नविन कार्कीले अनुसन्धान जारी नै रहेका कुनै प्रति क्रिया दिन नसक्ने भन्दै पन्छिए । उता केयर बालगृहमा पुग्दा संस्थापक पुष्पा अधिकारीले ती शिशुको बारेमा प्रति क्रिया नदिएपनि शिशु फा’ल्ने र आफूले लिनेबारेमा भने नाटक गरेको स्वीकारिन् ।
चाार बर्षअघि खोलेको संस्थाका संस्थापक र बैदेशिक रोजगारीमा गएकी महिलाले किन यस्तो गरेकी हुन् त भन्ने हाम्रो प्रश्नमा पुष्पाले यसरी बेलिविस्तार लगाइन् । कुनै पनि शिशु फालिएको भेटिएमा शुरुमा प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्नेमा पुष्पाले त्यसो नगरी सञ्जारमाध्यम बोलाई दृश्य खिच्न लगाएकी थिइन् । उनले त्यसबेला कोही दाबी गर्न आएमा शिशु दिने पनि बताएकी थिइन् ।
तर शिशुका आमाकै मिलमतोमा घटनाको संरचना तयार पारिएको थियो । अहिले प्रहरीले निगरानी थालेपछि भने केही सहयोगी सहित आएकी आमाले शिशुलाई लिएर गएकी छिन् । जुन हामीलाई प्राप्त सीसीटीभीको यो दृष्यले देखाउँ छ । चार बर्षअघि खोलिएको यस संस्थामा हालसम्म २० भन्दा बढी बालबालिकाले आश्रय लिएका छन् ।
जन्मदैकी यी शिशुलाई आमाकै मिलोमतोमा नाटक मञ्चन गरेर सहयोग उठाउने र पैसा संकलन गर्ने मात्रै नियत थियो वा अरु केही ? प्रश्न उब्जेको छ । पछिल्ला दिनमा बालमन्दिरबाटै नेपाली बालबालिका बेचबिखन गर्ने गिरोह प,क्राउ परेको घ’टना सेलाउन नपा उँदै विभिन्न नाममा खुलेका संस्थाहरुबाट यस्ता क्रियाकलाप हुन थालेपछि आ’शंका र चिन्ता दुबै बढाएको छ । हेर्नुहोस ईमेज खबरले तयार पारेको यो भिडीयो रिपोर्ट । भिडीयो यहाँ लिंकमा छ ।
Prevपाल्पा को’रोना संक्रमण मुक्त जिल्ला
भारतमा यात्रुवाहक अन्तर्राष्ट्रिय उडानमाथिको प्रतिबन्ध १५ जुलाई सम्म बढाइयो
आजको राशिफल : असार २५ गते, बिहीबार
मलमासमा, नब दम्पतीले के गर्नु हुँदैन, यस्तो गरे के हुन्छ? हेर्नुहोस् पूरा रहस्य…
पाथिभरा माताले सबैको कल्याण गरुँन ! १२ आश्विन २०७७ सोमवार को राशिफल